गायिका अन्जनाको ‘कता–कता हराएजस्तो लाग्छ’ भिडियो सार्वजनिक ! - Everest Dainik - News from Nepal
गायिका अन्जनाको ‘कता–कता हराएजस्तो लाग्छ’ भिडियो सार्वजनिक !
संगीतको क्षेत्रमा संघर्षरत पोखरेली गायिका अन्जना सुवेदीको आवाजमा रहेको ‘कता कता हराएजस्तो लाग्छ’ बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।
अपोस्टल रेकर्डिङ स्टुडियोमा रेकर्ड गरिएको उक्त गीतमा एक प्रेमिकाले प्रेमीलाई आफ्नो माया अर्पण गरेकी छिन् ।
रोम तामाङ्गको शब्द, संगीत र एरेन्ज रहेको उक्त गीतको भिडियो अनिल शाहले खिचेका हुन् भने सम्पादन किशोर सुवेदीले र निर्देशन जय चापागाईले गरेका हुन् ।
ट्याग्स: anjana subedi